Frantsa · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Frantsa · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Frantsa tamin'ny Jolay, 2017
Tonizia: Fanehoan-kevitra Manoloana Ny Fitsidihan'i Sarkozy
Tonizia26 Jolay 2017
Tamin'ny herinandro lasa, naneho hevitra momba ny fitsidihana ofisialy nataon'ny filoha Frantsay Nicolas Sarkozy ny tontolon'ny bilaogy Toniziana.
Ny Tontolon'ny Bilaogy Toniziana sy ny Fifidianana Frantsay
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana24 Jolay 2017
Bilaogera Toniziana marobe no naneho ny fahalianany momba ny fifidianana filoham-pirenena Frantsay. Misy antony maro no mahatonga azy ireo liana amin'izany. Ara-tantara, nozanahan'i Frantsa nandritra ny 75 taona i Tonizia ary manana fifandraisana ara-pitiavana sy fankahalana ny firenena roa tonta, manjaka kokoa ny fitiavana noho ny fankahalana.
Fifaninanana Youtube Ho An'ny Te-ho Mpanao Gazety
Amerika Avaratra19 Jolay 2017
Araka ny efa voalaza tamin'ny volana Aogositra, manomboka ny Project : Report [Tetikasa : Tatitra] ao amin'ny YouTube sy ny Foibe Pulitzer , izay fifaninanana ho an'ny te-ho mpanao gazety, ary efa vonona amin'ny toerany avokoa ny fitsipika sy ny torolalana rehetra.
Bilaogin-dahatsary Iraisampirenena: Fiaraha-miasa Miampita Sisintany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana17 Jolay 2017
Ny Vlog International (Bilaogin-dahatsary Iraisampirenena) dia tetikasa mampivondrona ireo bilaogeran-dahatsary miteny Espaniola : mandefa ny heviny ny olona ary rehefa voafidy ny iray amin'izany dia mandrakitra ny sombindahatsariny ny tsirairay